Anarana avy amin'ny teratany Breziliana
Anarana avy amin’ny teratany Breziliana
Teo anivon ny mponina ao Rio Laguna, fantatra fotsiny toy ny Lagos (ara-bakiteny»lake»). Koa Rodrigo de Freitas Olaimpika toerana taona, izay nisy fifaninanana ho an’ny fianarana ambony lakana sy eo canoeists.
Ny haben’ny ny vorona dia tsy mihoatra sm sy ny lanjany dia grama. Fa arakaraka ny endrika (mba), hitsena ny olona goavam-be — ny lanjan’ny roa-polo grama, sy ny halavan’ny vatana hatramin’ny roa amby roa-polo jereo ny Kôlibria no nozaraina ao amin’ny ilabolantany Andrefana, ary tafiditra ao ny mangatsiaka amin’ny faritra Avaratra sy ny Atsimo na ny kaontinanta Amerika.
Ny ankamaroan’ireo efa misy karazam-biby miaina ao Brezila
Ny volony ny vorona raha oharina amin’ny vato soa: ao ny tara-masoandro ny volom-borona sparkle mahafinaritra maromaro.
Ny Kôlibria no hany vorona izay afaka manidina aoriana ary koa ny sideways
roa amby roapolo aprily taona ao amin’ny faritra ao amin’ny tanàna maoderina Porto Seguro mifototra sambo Pedro Aquafresh Kaporaly. Zavatra Explorer nandeha tany India, dia tsofina eny mazava ho azy, ary tsy nahy taxied eo amin’ny tany tsy fantatra antsoina hoe»nosy Finoana ny Tampon-trano.»
← Mampiaraka ao Brezila an-tserasera
Mampiaraka toerana: Mampiaraka ao Brezila →